အသက် ၃၅ ကျော်ရင် ကလေးမယူသင့်ဘူးတဲ့လား - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 28/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ပြုတာ နောက်ကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဝအတွက် ရုန်းကန်နေရလို့ ကလေးယူချိန်နောက်ကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တချို့သော အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချိန် နောက်ကျနေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၃၅ နှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အန္တရာယ်များတဲ့အချိန် နောက်ကျတဲ့အချိန်လို့ လူအများစုက လက်ခံထားကြပါတယ်။
အသက်ကြီးမှ ရင်သွေးယူတာဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် မိခင်အတွက်ရော ကလေးအတွက်ပါ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် ကောင်းမွန်လှတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ကလေးရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ ရှိခဲ့ပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ ဝန်းကျင်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ? ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျရေရာတဲ့ အဖြေမျိုးရလာဖို့တော့ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ ဘဝအခြေအနေ တည်ငြိမ်ပြီလို့ ယူဆရတဲ့ အသက် ၃၀-၄၀ ကြားကာလမှာ ကလေးရယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တွေမှာတုန်းကဆိုရင် ဘဝအခြေတကျဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန်တည်ဆောက်နေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။
အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်မှ ရင်သွေးရယူဖို့ ဆုံးဖြတ်တာဟာ အန္တရာယ်များပြီး စွန့်စားလွန်းရာကျတယ်လို့ အစဉ်အဆက် ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ သိပ္ပံလေ့လာချက်သစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနေပါပြီ။ The National Center for Health Statistics ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ၁၉၇၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အသက် ၃၅-၃၉ ကြား အမျိုးသမီးတွေအကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှုန်းနဲ့ ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်း သိသိသာသာမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး အဆိုပါအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့နဲ့ ကလေးမွေးဖွားဖို့ စိတ်ချရတဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့လလည်း NTHS က အတည်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ ဝေးဝေးမကြည့်ပါနဲ့ ကယ်ရီ အန်ဒါဝုဒ်၊ ဟယ်လီ ဘယ်ရီနဲ့ နောက်ဆုံး မီဂန် မာကယ်လ်တို့ဟာ အသက် ၃၅ ကျော်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟယ်လီ ဘယ်ရီဆိုရင် သူမရဲ့ ပထမဆုံးရင်သွေးကို အသက် ၄၁ နှစ်မှာ ဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
New England Cenenarian ရဲ့ သုတေသနရလဒ်အရဆိုရင် နောက်ကျမှ ရင်သွေး ရယူတဲ့ မိခင်တွေဟာ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ရင်သွေးရယူတာဟာ ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် ရုံးကန်ပူပန်နေရမှုတွေကြောင့် ရင်သွေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပိုင်းမှာ ပိုမိုလစ်ဟင်းတတ်တာကြောင့် ဘဝတစ်သက်တာလုံး စိတ်ဖိစီးမှုကြုံလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်ကြီးမှ ရယူတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေဟာ ဉာဏ်ပိုကောင်းပြီး မိဘတွေကို ပိုပြီး အထောက်အကူပြုနိုင်ကြတယ်လို့လည်း တခြားစစ်တမ်းတစ်ခုက ဆိုပါသေးတယ်။
ဒါဆို အသက်အရွယ်ရမှ ကလေးယူတာက စိတ်ချရတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား? ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ယေင်္ကျားဖောင်စီး၊ မိန်းမမီးနေဆိုတဲ့ စကားပုံလည်းရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာဟာ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆို အန္တရာယ်များတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဘေးကင်းရန်ကင်း မီးဖွားနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်က အသက် ၃၅ နှစ် ကျော်နေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒီ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုး မဖြစ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင်သာ ဂရုစိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကိုလည်း လိုက်နာပါ။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ – ကိုယ်က အသက်အရွယ်ရလာမှ ကလေးယူဖို့ စိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့တာဆိုရင် အရာရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လူနေမှုပုံစံနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သေချာတွေးထားဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း သိတာနဲ့ ဆရာဝန်ပုံမှန်ပြပါ – ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ရင်သွေးငယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန် ဆေးခန်းပြတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လက္ခဏာတွေကို ပုံမှန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားပါ – ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံက အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင် ဒီနဲ့ တခြားသော အာဟာရဓာတ်အထွေထွေကို လုံလောက်မျှတစွာဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ ချိန်ညှိစားသောက်ပေးရပါမယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်တိုးတက်ပါစေ – ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အရမ်း ဝဖြိုးလာတာမျိုးကလည်း ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်လျော်ရုံကိုယ်အလေးချိန်မျိုးမှာ ရှိနေအောင် စားသောက်နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တက်တက်ကြွကြွနေပါ – ကိုယ်ဝန်ရလာချိန်တွေမှာ အမျိုးသမီးအများစုဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေရတာမျိုးတွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ရလာချိန်တွေမှာ ရင်သွေးရော မိခင်ပါ ကျန်းမာနေစေဖို့ တက်တက်ကြွကြွနေပေးဖို့၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွရွှင်လန်းနေမှုဟာ ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေကို စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး သက်လုံလည်းတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ဟာ ရင်သွေးငယ်မွေးဖွားချိန်မှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ထိခိုက်စေမယ့် အရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ – အရက်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးလို အရာတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကိုရော ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးငယ်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို သုံးစွဲတာရော သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အနီးဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်တာကိုရော ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ခရိုမိုဆုမ်းအခြေအနေကို ဆန်းစစ်ပါ – ခရိုမိုဆုမ်း မူမမှန်တာ (Chromosomal Abnormalities) ဟာ ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ အဆိုပါလက္ခဏာတွေ ရှိမရှိ ကြိုတင်ဆန်းစစ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ prenatal cell-free DNA (cfDNA) ကို ဆန်းစစ်အဖြေထုတ်ပေးဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ OG ဆရာဝန်တွေထံ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကိုယ်က အသက် ၃၅ ကိုကျော်လွန်လာပြီ ဒါမှမဟုတ် ချဉ်းနင်းလာပြီဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ မသင့်တော့ဘူးလို့ မယူဆလိုက်ပါနဲ့။ အထက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာပြီး ကျန်းမာစွာနေထိုင်မယ်ဆိုရင် အသက် ၃၅ နှစ်နဲ့အထက် အရွယ်ဖြစ်နေလည်းပဲ တခြားအသက်အရွယ် မိခင်တွေနဲ့တန်းတူ ရင်သွေးငယ်ကို ဘေးမသီရန်မခဖွားမြင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ် ပိုင်ဆိုင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကသာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝရဲ့ ဆည်းလည်းသံလေးတွေကို ရယူဖို့ အသက်ကြီးတယ် ငယ်တယ်ဆိုတာ အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ မိခင်မေတ္တာကသာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်လို့ …
ဗိုက်ထဲကရင်သွေးလေး လှုပ်နေပြီလား မေမေတို့ ။ ။